ရှာဖွေနိုင်သည့်အချက်များ - စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေအသစ် ၂၁ Martech Zone
သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2013 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုတည်ဆောက်ခြင်း၏အုတ်မြစ်များသည်ယခုအချိန်ထိပါ ၀ င်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းစျေးကွက်မဟာဗျူဟာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသောကုမ္ပဏီများသည်ယခုအခါအောင်မြင်စွာမောင်းနှင်နေသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သောကုမ္ပဏီများစွာသည်ထိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဆုံးရှုံးသွားသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြရသည်။ သို့သော်သက်ဆိုင်သူများ၊ မကြာခဏနှင့်မကြာသေးမီကပါဝင်သောပရိသတ်များအတွက်တန်ဖိုးရှိသည့်အကြောင်းအရာများကိုဆက်လက်ရှာဖွေရန်ကုမ္ပဏီများသည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆက်လက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
သင်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှု၊ လူမှုမီဒီယာနှင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Google, Facebook, Twitter နှင့်အခြားလူကြိုက်များသောအင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာများလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်သောကြောင့်သင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်ကုမ္ပဏီများသည်အခွင့်အလမ်းများကိုပိုမိုရှာဖွေကြလိမ့်မည်။ ဤစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုမရရှိသူများရှေ့တွင်သင့်ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
Randy Milanovic KAYAK ၏ဤနှင့်အတူရိုက်ထားသည် အကြောင်းအရာစျေးကွက်၏ 21 အသစ်သောစည်းမျဉ်းများ! ငါသည်သူ၏ ebook ကိုကူးယူဖတ်ရှုဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။
Tags: အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းအရာစျေးကွက်အကြောင်းအရာအစီအစဉ်ဘာသာပြောင်းစေ့စပ်ထားခြင်းရှာတွေ့နိုင်သည်ကို formatsဧည့်သည်၏ရေးသားချက်များနံပါတ်အစားအသုံးပြုသောဟက်ရှ်သင်္ကေတခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်သော့ချက်စာလုံးတွေလင့်များသတင်းရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်းအရည်အသွေးအရေအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုသတင်းရင်းမြစ်မြင်သာယုံကြည်မှုအသံ
ဗွီဒီယိုစျေးကွက် - နံပါတ်များအားဖြင့်လူမှုအထောက်အထား
20:2013 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 55
ငါ၏အ infographic ဒေါက်ဂလပ် featuring အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အလွန်တန်ဖိုးထား။
20:2013 pm မှာနိုဝင်ဘာ 11, 23
သင်လောင်း! ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အချို့ရောင်းအား ဦး ဆောင်လမ်းပြမျှော်လင့်ပါတယ်!
20:2013 pm မှာနိုဝင်ဘာ 11, 26
ကိုယ်လည်းပဲ! တကယ်တော့ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာကိုတန်ဖိုးထားသောအခါ၎င်းသည်အကျိုးရှိသည်။ ငါမင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုစာရင်းသွင်းမယ်။ ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
20:2013 pm မှာနိုဝင်ဘာ 11, 59
ဒေါက်ဂလပ်၊ မင်းမှာမင်းစာအုပ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အခွင့်အရေးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မရရှိလျှင်, သင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ paperback မိတ္တူပေးပို့ဖို့ပျော်ရွှင်ထက်ပိုလိမ့်မယ်။